﻿ ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? साबधान !
प्रदेश १ र २ मा भारी वर्षा, सतर्कता अपनाउन मौसमविद्को सुझाव
ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? साबधान !
बुधबार १५, माघ २०७६
अहिलेको जमानमा मोबाइलको प्रयोग जरुरतभन्दा पनि अगाडि बढिसकेको छ । केही अघिसम्म फोन गर्न मात्र प्रयोग हुने मोबाइल अब जीवनका अनेक हिस्साहरुलाई समेटेर अगाडि बढिरहेको छ । सुतेर उठ्दा चाहिने अलार्म होस् या बजारमा केही किनेर पैसा तिर्न नै किन नहोस् हामी मोबाइलको प्रयोग गर्छौ । योसँगै केही मानिसहरु त ट्वाइलेटमा पनि मोबाइल लिएर बस्ने गर्छन् । तर, यो स्वास्थ्यका लागि निकै नराम्रो बानी हो ।
ट्वाइलेटमा मोबाइल लिएर जाने हो भने अत्यधिक धेरै ब्याक्टेरिया हाम्रो मोबाइलमा जोडिनेछन् । ट्वाइलेटबाट निस्कँदा हामी हात त धुन्छौँ तर मोबाइल धुन सक्दैनौँ । यस्तो हुँदा त्यहाँबाट ती ब्याक्टेरियाहरु बाहिर आउँछन् जुन हाम्रो पेटसम्म पुग्छन् ।
झन् सार्वजनिक शौचालयहरुमा जसले मोबाइल प्रयोग गर्छ, उसलाई धेरै समस्या देखिने निश्चित हुन्छ । अर्कोतिर हामीले मोबाइल प्रयोग गरिरहँदा मोबाइल तात्ने भएकाले ब्याक्टेरियाहरुलाई त्यहाँ सहज वातावरण हुन्छ जुन पछि हामीलाई समस्या बन्छन् ।
त्यसैले ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्ने बानी जति सक्दो छिटो छोडेको नै राम्रो हुन्छ ।
धेरै नखानुस् नुन, कति खाने त ?
गुणस्तरहीन स्यानेटाइजर उत्पादन गर्ने सुनसरीको एउटा उद्योगलाई कारवाही
सावधान ! बिहानै मोबाइल हेर्नाले बढाउँछ यी रोग
नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं.४ द्वारा क्षेत्र भरीका वडाअध्यक्षहरुलाई प्रशिक्षण प्रदान
संविधान दिवसको अवसरमा नेकपा विद्यार्थीद्वारा सरसफाइ तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न
संविधान दिवसको अवसरमा विराटनगरमा दीप प्रज्ज्वलन
राष्ट्रिय युवा संघद्धारा संविधान दिवसको अवसरमा दीप प्रज्ज्वलन
इटहरी सिटी लियो क्लबद्वारा योगा प्रशिक्षण तथा खेलकुद सामग्री वितरण